Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Ufumana njani isiDanga sakho njengeNomad yedijithali
Ukujikeleza umhlaba, usebenza kwiLaptop yakho, kunye nokufumana isidanga sakho kunokwenziwa kancinci kakhulu kunokuba ucinga.
Inkcubeko yokufuduka yedijithali ibangele iphupha kwizigidi zeentliziyo zabantu ukuba bayisuse imeko yabo kwaye bazikhethele iindlela zabo ebomini.
Mhlawumbi ufuna ukufundisa isiNgesi eTshayina okanye ugcobe phantsi kwelanga eBali.
Nokuba uphi indawo oya kuyo ephupheni, akufuneki ukhethe phakathi kokuhamba nokwakha ikhondo lomsebenzi. Ngapha koko, ezi zimbini zinokuhlala ngokulula ngokuvisisana kwaye zinokukunceda ufezekise indlela ophila ngayo ngokulula.
Ukuba unomdla wokufunda Ungangu-nomad yedijithali ngelixa usesikolweni, funda uqhubeke.
Khetha isiDanga esinamathuba kuMsebenzi okude
Ukuba ufuna ukuba yi-nomad yedijithali, kuya kufuneka ukhethe eyona iya kukunika amathuba emisebenzi anokuguqukayo. Endaweni yokukhetha umhlaba oza kukubophelela emsebenzini we-ofisi kule minyaka ingama-40 izayo, jonga ngakumbi amashishini asekwe kwidijithali. Ungangena kwinkqubo, uyilo lwewebhu, ukuthengisa ngokwedijithali okanye ukubhala. Unokufumana isidanga sakho kwimfundo yokunyusa ubungqina bakho bokufundisa isiNgesi phesheya.
Zininzi iinkqubo eziguquguqukayo kwi-Intanethi eziza kukunceda uhlale esikolweni ngelixa useluhambeni. Unokufaka isicelo se mboleko yomfundi wabucala ukufumana inkxaso-mali yokufunda kunye nezinye iindleko. Elona candelo lililo malunga nemali mboleko yabucala kukuba unenkululeko engakumbi kwindlela oyisebenzisa ngayo imali oyibolekayo. Kukwakho namathuba angakumbi okuhlawula onokuwasebenzisa emva kokuthweswa isidanga.
Kuya kufuneka ugcine iinyawo zakho emhlabeni njengoko iingcinga zakho malunga nokuhlala phesheya zibaleka. Ubomi baphesheya kwezilwandle bunokuba nzima, kwaye mininzi imiceli mngeni ekuza kufuneka woyise njengomphambukeli. Ukusuka kwizithintelo kulwimi ukuya kumanqanaba okuguqula imali, zininzi izinto ekufuneka uzenzile ngaphezulu komsebenzi nesikolo. Kuya kufuneka uzalisekise iimfuno zevisa kwiindawo zakho zokuhamba. Eyona ndlela ilula yokungena kumazwe amaninzi kukufunda okanye i-visa yokusebenza. Oku kunokuba kukufundisa isiNgesi, ukuba ngumlingane okanye ukubhalisela izifundo kwisikolo solwimi ngelixa ufumana imfundo yakho yasekholejini kwi-intanethi.
Unokufuna ukuhamba ngokukhululekileyo kwaye uhlale naphina apho ubomi bukusa khona, kodwa oko kunokukufikelela kude kube ngoku. Unokuba nenkululeko enkulu njenge-nomad yedijithali, kodwa kusafuneka ube neenjongo ezicacileyo ngekamva lakho. Esinye sezona zizathu ziphambili kukuba emva kokuba ukubhadula kwasekuqalekeni kuphelile, uyakuzifumana ukhumbula ekhaya okanye ungaziva ungakhombisi. Ngaphandle kokwazi apho ufuna ukuya khona, kunokuba nzima ukuhlala ukhuselekile ngokwemali.
IiVisa ziyaphelelwa, kwaye umntu ofuna ukuhlala kumazwe amaninzi kuya kufuneka achithe ixesha kwilizwe labo phakathi kweevisa. Uzohlala phi okwethutyana? Uyakwenza ntoni xa ufuna ukubeka phantsi iingcambu? Ingaba uyazi indlela yokukhusela ikhaya lakho xa useluhambeni? Ngaba injongo yakho iphambili yokufumana ubumi kwilizwe langaphandle okanye ukubuyela ekhaya ngoku kwakhona phakathi kohambo? Njengoko ubona, oku kufuna ukucwangciswa okucingayo nokuba uyaphi okanye ufunda ntoni.